Belgium: Mhumhi Noëlla inotorwa mifananidzo mune masikati makuru - Tepe RELAY
Mhumhi Noëlla inotorwa mufananidzo mune masikati makuru
Canada – 10/3 podcast: How pipeline protesters are trying to…
India: SIT kudiwa kweElgar inowedzera misiyano…
Kuwedzerwa kweVadiki / Vakadzi Bhizimusi muMali: The…
Kuwanikwa kwemitumbi miviri yemakwai muNetherlands kunoratidza kuti imwe canine iri munzira yekuenda kuBelgium.
LFlemish Agency for Natural and Forests (ANB) yakaburitsa mifananidzo yekutanga yakatorwa masikati machena weNoëlla, mhumhi inogara mudunhu reLimburg, neChishanu. “Iyi ndiyo mifananidzo yemavara ekutanga yeNoëlla. Naizvozvo tine chokwadi chekuti ari kuita zvakanaka uye kuti ari mudunhu iri, ”inodaro sangano. Panguva imwecheteyo, kuwanikwa kwemitumbi miviri yemakwai muNetherlands kunoratidza kuti imwe canine iri munzira yekuBelgium.
Mifananidzo iyi yakatorwa necamera kamera yeFlemish Research Institute for Natural and Forestry (INBO). "Kazhinji, mapikicha anowanzo torwa usiku, mune nhema nechena, uye saka haana kujeka," akadaro ANB musango ranger. "Noëlla anoita kunge akasarudzika, haana kubereka mavara ehurombo. "
Mifananidzo yaNyamavhuvhu, imwe mhumhi, yakanga yatotorwa gore rapfuura. Iyo miviri yekufungidzira iri munzvimbo imwechete. "Nyamavhuvhu aive akatenderedza," inodaro ANB. "Hapana mafoto akajeka asi isu tinoziva kuti vaive pamwechete. Noëlla naAugust vaviri vakaroorana vakatanga mudunhu iri. "
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://www.lesoir.be/280030/article/2020-02-14/la-louve-noella-prise-en-photo-en-plein-jour
Nhau kubva kuna Mambokadzi Elizabeth II: izvo zvikonzero zviviri nei Mambokadzi aisazorega
Canada – 10/3 podcast: How pipeline protesters are trying to shut down Canada
India: SIT chikumbiro cheElgar chinowedzera MVA mutsauko | India News
Kuvandudzwa kweVadiki / Vakadzi Bhizimusi muMali: Gurukota Safia Bolly…
Switzerland: "Tinofanirwa kubhadhara mutero iwo mashoma ezvishoma muSwitzerland"